Kangal Dog - အပြည့်အဝမွေးမြူရေးလမ်းညွှန် (အပူချိန်၊ သက်တမ်းနှင့်အချက်အလက်) - Breeds
Kangal ခွေးသည်အစောပိုင်းတူရကီရှိ Sivas ဒေသမှမွေးမြူရေးအကြီးအကဲကြီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဤခွေးသည်နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ။ ရွေးချယ်ထားခြင်းခံရပြီးအဓိကအားဖြင့်တူရကီသိုးထိန်းတစ် ဦး အနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏အရွယ်အစား၊ ခွန်အား၊ စိတ်ထားနှင့်အသွင်အပြင်ပေါ်မူတည်ပြီးအုပ်ထိန်းသူခွေးဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ကို Kangal ÇöbanKöpeğiသို့မဟုတ် Kangal Shepherd Dog ဟုလည်းလူသိများသည်
၎င်းတို့သည်တိရိစ္ဆာန်အမြောက်အများ (ဥပမာ - မြေခွေး၊ ဝံပုလွေများနှင့်ဝက်ဝံများ) မှတိရစ္ဆာန်များကိုကာကွယ်ရန်အားလုံးအတွက်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေလုပ်ကိုင်ရန်အထူးသင့်တော်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေး၊ ကလေးသူငယ်များကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးသားကောင်များကိုရန်လိုသောသဘောရှိရန်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သောစိတ်ထားရှိသည်။
သူတို့ကို ၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင်သိုး၊ ဆိတ်များနှင့်တိရစ္ဆာန်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်သည့်အတွက်အမေရိကန်၌ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။
Kangal Dog သည်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်ရန်သို့မဟုတ်လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွင်တက်ကြွစွာအလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သားကောင်များ၊ သူတို့၏စိတ်နေသဘောထား၊ အပြုအမူ၊ မျိုးပွားစံနှုန်းများအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်နှင့်၎င်းသည်သင့်အတွက်သင့်လျော်သောမျိုးဆက်ဟုတ်မဟုတ်ကိုနားလည်ရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
Kangal Dogs ကိုမွေးမြူရေးခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Kangal Dogs ၏သမိုင်းနှင့်မူလအစ
Kangal Dogs ကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲ
လိုအပ်ချက်များ Socializing ကဒ်ခွေး
Kangal Dogs ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်: Coat, အရောင်နှင့်ဖြီးလိမ်းပုံ
Kangal Dogs ၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြuesနာများ
မင်းသိလား? စိတ်ဝင်စားဖွယ် Kangal အဖြစ်မှန်ငါးခု
Kangal Dogs ကိုအကျဉ်းချုပ်
ရည်ရွယ်ချက် အလုပ်လုပ်ခြင်း (အုပ်ထိန်းခြင်းအထူးပြု) / သိုး၊ ဆိတ်နှင့်ကျွဲနွားအုပ်ထိန်းသူ
အရွယ်အစား ၃၀ မှ ၃၂” (အထီး) သို့မဟုတ် ၂၈ မှ ၃၀” (အမျိုးသမီး)
အလေးချိန် 110 မှ 145 ပေါင် (အထီး) သို့မဟုတ် 90 မှ 120 ပေါင် (အမျိုးသမီး)
သက်တမ်း 12 မှ 15 နှစ်
အရောင် အနက်ရောင်နှာခေါင်းနှင့်နားရွက်များရှိသည့် Tan
အပူချိန် လူသိများလူသား, ကလေးများနှင့်မိသားစုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဆီသို့ငြိမ်းချမ်းသော။ အခြားအားလုံးဆီသို့ ဦး တည်နယ်မြေ။
နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်း မိမိကိုယ်ကိုသာလေ့ကျင့်ခန်း - ၄၅ မိနစ်မှတစ်နာရီသာဖြစ်သည်
နေ့စဉ်စားသုံးမှု ၂၆၀၀ နှင့် ၃၅၀၀ ကယ်လိုရီအကြား
လူသိများသောကျန်းမာရေးပြuesနာများ Dysplasia တင်ပါးဆုံရိုး
တူရကီ kangal သည်အစောင့်ခွေးနှင့်သိုးထိန်းခွေးဖြစ်သည် ယူနိုက်တက်ဂေဟာအိုးကလပ် တရားဝင်အမျိုးအနွယ်အဖြစ်တူရကီအဆိုးမြင်အဖွဲ့ချုပ်။
ဤသည်ကဒ်ခွေးတူရကီ၏အမျိုးသားရေးခွေးဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရမွေးမြူရေးစင်တာနှစ်ခုရှိသည် သီရိ ; ခွေးကနေအစပြုဘယ်မှာမြို့ ။
ယူအက်စ်တွင် Kangal ခွေးကလေးသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အထက်ကျသင့်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ခွေးပေါက်စများကို US လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ရောင်းချကြသည်။ အရာလည်း ဥရောပကနေခွေးတင်သွင်း ။
တူရကီသိုးထိန်းခွေးသည် ၁၂ ရာစုအစောပိုင်းတွင်တူရကီနိုင်ငံအရှေ့ခြမ်းကုန်းပြင်မြင့်မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်thရာစုနှစ်။
ဒါဟာ Kangal ထင်နေသည် အစောပိုင်း mastiffs နှင့်ဆက်စပ်သော သူတို့ကသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည် သရဲ အမေရိကန် Mastiff နှင့် Bullmastiff နှင့်အတူမိသားစု။
Kangal Shepherd ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသိုးအုပ်နှင့်မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်းကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်များကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
သူသည်ကွဲပြားခြားနားသောတိရစ္ဆာန်များ (ဆိုလိုသည်မှာငှက်များ) ကိုကာကွယ်ရန်အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးစီမံခန့်ခွဲရမည်။
သူတို့သည် ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင်ယူကေသို့အမေရိကန်နှင့် ၁၉၈၅ ခုနှစ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပထမဆုံးရောက်ရှိခဲ့သည် ခွေးခြောက်ကောင်မှဆယ်ကောင်စီကိုတင်သွင်းသည် အမေရိကန်သို့တစ်နှစ်။
တူရကီသိုးထိန်းများသည်သူတို့၏ခွေးများသည်လူသားများသို့မဟုတ်သိုးများ (ဆိုလိုသည်မှာသိုလှောင်ခြင်းနှင့်တိရစ္ဆာန်များ) အပေါ်ကျူးကျော်ခြင်းမရှိကြောင်းသေချာစေခဲ့သည်။ သိုးထိန်းသိုးသိုးဆုံးရှုံးဖို့မတတ်နိုင်သောကြောင့်, ဒီအပြုအမူကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, အကျိုးဆက်ဖောက်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ပါဘူး။
၎င်းတို့သည်လွတ်လပ်ရေးကိုပြသလိမ့်မည်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ၂ နှစ်ခန့်သာရှိပြီးသူတို့သည်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်စတင်ကျင့်သုံးသောအရွယ်ဖြစ်သည်။
သူမသည်မိသားစု၊ သိုး၊ နွားများနှင့်အမြဲနိုးနိုးကြားကြားရှိပြီးကာကွယ်ပေးမည့်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။
သူတို့ဇာစ်မြစ်ကြောင့်တူရကီခွေးခွေးများသည်ပျင်းခြင်းနှင့်မလိုချင်သောအပြုအမူများကိုကာကွယ်ရန်အလုပ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကခွေးတွေအလုပ်လုပ်နေတယ်၊kangal ခွေးဖြစ်ကြ၏ပုံမှန်အားဖြင့်ခွေးပိုင်ရှင်အသစ်များသို့မဟုတ်မိသားစုအိမ်ငယ်များအတွက်အကြံပြုခြင်းမရှိပါ။
အကယ်၍ လူနေအိမ်သို့မဟုတ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် kangal ခွေးများကိုစဉ်းစားလျှင်ဤအချက်နှစ်ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
သင့်ခွေးအားလေ့ကျင့်ရန်လုံခြုံသော၊ ပိတ်ထားသောနေရာတစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။ တူးခြင်းနှင့်ခုန်ကာကွယ်တားဆီးဖို့။
ပုံမှန်အားဖြင့်ခွေးနှစ်ကောင်သုံးကောင်သည်သိုးစု ၁၅၀ မှ ၂၅၀ မှမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသိုးစုကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်မှုကတော့ Neuter အထီးနှစ်ခုနှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး တည်းဖြစ်သည် ။
အကယ်၍ တူရကီ Kangal သည်သားကောင်များကိုကြားလျှင်သို့မဟုတ်အာရုံခံပါကသူ့နွားကိုကာကွယ်ရန်အဆင့်သုံးဆင့်ရှိသည်။
အကယ်၍ သားကောင်သည်အဟန့်အတားမဖြစ်ဘဲ ဆက်၍ ချဉ်းကပ်နေပါကသူသည်ဟောက်လိမ့်မည်
သူသည်မြန်နှုန်း၊ စွမ်းအားနှင့်သွက်လက်သောစွမ်းရည်ရှိပြီးကျော်လွန်သောအမြန်နှုန်းသို့ရောက်ရှိသည် တစ်နာရီမိုင် ၃၀ (တစ်နာရီကီလိုမီတာ ၅၀) နှင့် psi 700 ကျော်ကိုက်သောစွမ်းအား၊ Pitbull ၏သုံးဆ ။
တူရကီ Kangal သည်ပြိုင်ကားများ၊ ဝံပုလှေများ၊ Hawk များ၊ မြေခွေးများ၊
ခွေးတစ်ကောင်သည်အခြားအစောင့်ခွေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာလိမ့်မည်၊ ၎င်းတို့သည်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောဝါးများနှင့်တူးသူများဖြစ်သည်; အထူးသဖြင့်ခြံစည်းရိုးအောက်မှာတူးရတာကြိုက်တယ်။
ဤခွေးများသည်အခြားသိုးထိန်းခွေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပင်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာသည်။ ၎င်းတို့သည်ခွေးပေါက်စများကဲ့သို့ပျော့ပျောင်း။ နှစ်သက်စရာကောင်းသော်လည်း၎င်းတို့သည်အစွမ်းထက်သည့်ဝါးများနှင့်တူးသူများကဲ့သို့ကျော်ကြားသည်။
သမိုင်းကြောင်းအရ Sivas Kangals များသည်ကျေးရွာများမှထွက်သောပစ္စည်းများကိုစားသုံးခြင်း၊ ရေ, ဆိတ်ရဲ့နို့, ဒိန်ချဉ်နှင့်ရပ်ကြီးအပါအဝင်။
ဤသည် yal အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားသည့်လူသိများခဲ့သည် ။
ဤသည်ကိုအုပ်ထိန်းသူများသမိုင်းဆိုင်ရာအစားအစာဖြစ်ကောင်း, ကမြင့်မားသောပမာဏအတွက်ပရိုတိန်းကင်းမဲ့အဖြစ်အာဟာရပြည့်စုံသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်သင်ကအရည်အသွေးမြင့် kibble ဆီသို့ ဦး တည်ကြည့်ရှုသင့်သည်, ရံဖန်ရံခါကုန်ကြမ်းအသားများထည့်ရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။
ယူအက်စ်တွင်ခွေးအစားအစာနှင့်တွေ့ဆုံရန်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတွက်တရား ၀ င်လိုအပ်ချက်မရှိပါ AAFCO အာဟာရဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များသို့မဟုတ်ထုပ်ပိုးခြင်း ။
ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာစောင့်ရှောက်ရန်လွယ်ကူစေရန်ခွေးအများစုသည်အရည်အသွေးမြင့်သော kibble ဖြင့်ကျွေးမွေးသည်။ အထူးသဖြင့်ကြီးမားသောဖောက်များနှင့်တက်ကြွသောခွေးများအတွက်ရေးဆွဲသည်။
ခွေး, သို့သော်, မြို့ကြီးများသို့မဟုတ်ဆင်ခြေဖုံးဒေသများရှိကြောင့်အစာကျွေးပြင်ဆင်, ဝယ်ခြင်းနှင့်အေးခဲ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်ဒီခွေးနှင့်အတူကုန်ကြမ်းအစားအသောက်များတွင်ရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံး, သို့သော်, နှစ် ဦး စလုံးအစားအစာအမျိုးအစားများအပေါ်ရှင်သန်ပါလိမ့်မယ်။
အပြည့်အ ၀ စိုက်ပျိုးသောသန့်စင်သောအပင်သည်အထင်ကြီးလောက်သော ၃၂ လက်မရှိပြီး ၁၄၅ ပေါင်အလေးချိန်ရှိသည်။ သူတို့လိုအပ်သည် -
အထီး ၃,၉၀၀ မှ ၄,၈၀၀ ကယ်လိုရီ ၂၆၀၀ မှ ၃၅၀၀ ကယ်လိုရီ
အမျိုးသမီး 3000 မှ 4,100 ကယ်လိုရီ 2,100 မှ 2,800 ကယ်လိုရီ
အရွယ်ရောက်ပြီးသောယောက်ျားကြီးတစ် ဦး သည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၇ ခွက် (၂ ခွက်) ခြောက်သွေ့သော kibble ၏စားသုံးမှုကိုရောက်ရှိရန်စားသုံးလေ့ရှိသည်။
ခွေးသည်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ၁ ပေါင်လျှင် ၃၀ ကယ်လိုရီလိုအပ်သည်။
သားပေါက်ကြီးများဖြင့်သင်၏ခွေးကလေးကိုဆယ်မိနစ်လောက်စားရန်လုံလောက်သည်။ အကယ်၍ သင်၏ခွေးကလေးသည်ဆယ်မိနစ်အကြာတွင်အစားအစာကိုကျန်ခဲ့ပါကကျန်ရှိသောပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးသူတို့၏နောက်တစ်ဆင့်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချပါ။
သူတို့ကတစ်ပတ်ကို ၁၀ မိုင်လောက်မောင်းမယ်။ တစ်နေ့လျှင် ၄၅ မိနစ်။
ဤခွေးများသည် (ဥပမာ၊ Huskey) အလွန်အမင်းတက်ကြွမှုမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ပြင်ပနေရာများရှိကြီးမားသောအလုပ်လုပ်သည့်ခြံများနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
သူသည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်သီးသန့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောနေရာတစ်ခုလိုအပ်သည်။ ထိုနေရာတွင်သူတို့roက ၅ ထောင်ကျော်သွားနိုင်သည်။
သင်၏ Kangal Shepherd ကိုကင်းလှည့်ရန်၊ လှည့်လည်ရန်နှင့်ပြေးရန်အချိန်များစွာပေးလိုက်ခြင်းကသူတို့ကိုသစ္စာစောင့်သိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်လာစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုအပြည့်အ ၀ ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းသည်၎င်းတို့အတွက်ပင်ရင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ဤတာဝန်အတွက်လေ့ကျင့်မှုမလိုအပ်ပါ။
Kangal နှင့်သင်၏လေ့ကျင့်မှုအခန်းကဏ္ mostly သည်များသောအားဖြင့်ကြီးကြပ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤအုပ်ထိန်းသူကိုပုံမှန်အားဖြင့်အခန်းကဏ္ two နှစ်ခုမှပြီးမြောက်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်သည်
Guardianship Shepard (ဆိုလိုသည်မှာကျွဲနွားသို့မဟုတ်သိုးအုပ်အကာအကွယ်) - သဘာဝအရအများဆုံးဖြစ်သည်
Field Protection (ဆိုလိုသည်မှာမွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်) - တက်ကြွသောကင်းလှည့်မှု၏အခန်းကဏ္။
အွန်လိုင်းမှအချို့သောသတင်းရင်းမြစ်များက၎င်းသည်ခွေးအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးခွေးဖြစ်သည်ဟု ကိုးကား၍ ၎င်းသည်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။
မိခင်နှင့်မာစတာတို့ကငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် Kangal ကိုအဖော်ပြုပေးခဲ့သည်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ဒီခွေးတက်ကြွခြင်းနှင့်ငယ်ရွယ်လူမှုရေးလိုအပ်သည်; အထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည်အခြားအသံများ၊ အနံ့များနှင့်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ထိတွေ့ရန်အကာအကွယ်တွင်အသုံးပြုနေပါက။
သင့်ခွေးကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ဖော်ထုတ်ခြင်းသည်၎င်းတို့အားသူတို့၏တက်ကြွသောအခန်းကဏ္ for အတွက်ပြင်ဆင်ပေးသည်။
သူမသည်နွေ ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီနှင့်အတူတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်သူတို့ရဲ့ကုတ်အင်္ကျီကိုသွန်း။
ရာသီတစ်ခုစီတွင်သူမသည်သတ္တုဘီးနှင့် deshedding tool ကို သုံး၍ လေးလံသောနူးညံ့မှုလိုအပ်သည်။
ဒီ tool ကသူတို့ရဲ့ overcoat ကပိတ်မိနိုင်သည့်သူတို့ရဲ့ undercoat မှဆံပင်ချွတ်ချွတ်ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အင်္ကျီကိုသွန်းပြီးနောက်သူမသည်လစဉ်မိနစ် ၃၀ ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။
သူ၏သိပ်သည်းသောကုတ်အင်္ကျီသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးတသမတ်တည်းသွန်းလောင်းရလိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့် hyperallergic dog မဟုတ်ပါ။
သူတို့ကသူတို့ရဲ့သမိုင်းအတွက်အနည်းငယ်သာ Cross- မွေးမြူရေးနှင့်အတူအလွန်စင်ကြယ်သောဖောက်ဖြစ်၏ ကြောင့် Sivas တူရကီရှိအခြားမြို့များနှင့်ဤမျှလောက်ဝေးလံသောဖြစ်ခြင်း ။
ဤသည်အထီးကျန်တစ်ခုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည် အလွယ်တကူခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သောမျိုးပွားစံနှုန်း ယင်း၏လက်ဝါးကပ်တိုင်မွေးမြူရေးမရှိခြင်းကြောင့်, ပုံမှန်မဟုတ်သောအရောင်များ (ဥပမာ - ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်တွင်ဖြူဖဖြူဖြူသို့မဟုတ်ဖြူ) သို့မဟုတ်ကုတ်အင်္ကျီများ (ဥပမာ fluffy) သည်ခွေးမစင်ကြယ်သောအညွှန်းများဖြစ်သည်။
ဤသန့်စင်သောခွေးသည်အစွမ်းထက်သည့်ခွေးဖြစ်ပြီးအရှည် ၃၀ မှ ၃၂ လက်မအကြားရှိသင့်သည် (ပခုံးဓါးထိပ်) နှင့် ၁၁၀ မှ ၁၄၅ ပေါင်ကြားရှိသင့်သည်။
တူရကီခွေးတစ်ကောင်သည်ရှည်လျားသောခန္တာကိုယ်ကိုအမြီးဖြင့်ခုန်။ အမြီးဖြင့်ကျော်။ ကျော်ကြားသည်။
အဆိုပါ Sivas ခွေးရဲ့အရောင်ဟာဖောက်၏ကျော်ကြားဝိသေသဖြစ်၏ အစဉ်အမြဲအစိုင်အခဲ tan (ဆိုလိုသညျအလငျးရွှေ, fawn Sable, ဒါမှမဟုတ် dun) ဖြစ်သင့်သည်။
အနက်ရောင်နှာခေါင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံသူတို့၏ ဦး ခေါင်းထိပ်တွင်ဆက်လက်ရှိနေသည်။ ဒီဖောက်စံအတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်
အချို့သော crossbreeds တွင် brindle (သို့) အဖြူရောင်ရှိသည်။ brindle သည် crossbreeding ၏သေချာသည့်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ အဖြူသည်ခွေး၏ဒူးအောက်မှသာခွင့်ပြုသည် (ဆိုလိုသည်မှာပေသာ) ။
အပေါ်ပိုင်းကုတ်သည် (အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသည့်အတိုင်း) သင့်၏အပေါ်ယံအင်္ကျီသည်မီးခိုးရောင်နှင့်ပျော့ပျောင်းနေပြီးထိတွေ့မှုဒဏ်ကိုခံရလိမ့်မည်။
ရာသီပေါ် မူတည်၍ ကုတ်အင်္ကျီအရှည်သည် ၃ စင်တီမီတာမှ ၇ စင်တီမီတာကြားရှိသည်။
နွေ ဦး ရာသီတွင်သူမအင်္ကျီသည်ပုံမှန်အနေအထားသို့ပြန်ရောက်သည့်အခါပိုမိုထူသောကုတ်အင်္ကျီကိုသွန်းရမည်။
ကုတ်အင်္ကျီသည်ဖြောင့်ဖြောင့်နေသည်၊ သူမသည် dewlap (ဆိုလိုအရေပြားလိပ်) မရှိပါ။
ဦး ခေါင်း ဦး ခေါင်းခွံကိုနှစ်ဖက်စလုံးမှ ၀ ိုင်းရံထားသည်။ ဦး ခေါင်းသည်ကြီးမားရမည်၊ ခေါင်း၏အကျယ်မှာ ၅၅% ခေါင်းဖြစ်သင့်သည်။
ကိုယ်ခန္ဓာ ခန္ဓာကိုယ်သည်ညှိုးနွမ်းနေသောအမြင့်ထက် ၁၀ မှ ၁၂% ကြားပိုရှည်သင့်သည်။ ပုံမှန်အထီးကိုယ်ထည်သည်အရှည် ၃၃” မှ ၃၆” ဖြစ်သင့်သည်။
ခြေထောက်တွေ ကြီးမားသောအဝိုင်းသို့မဟုတ်ဘဲဥပုံခြေထောက်များသည်ပိုကြီးသောရှေ့ခြေနှင့်အစိုင်အခဲ tan သို့မဟုတ် white ဖြစ်သည်။
ကုတ်အင်္ကျီ နွေရာသီတွင် ၃ စင်တီမီတာနှင့်ဆောင်းရာသီတွင် ၇ စင်တီမီတာတိုသောဖြောင့်သောသိပ်သည်းသည့်နှစ်ဆအင်္ကျီ။
အရောင် အနက်ရောင်နှာခေါင်းအဖုံးနှင့်နားရွက်အပြည့်ပါ ၀ င်သည့်ခွေးတစ်ကောင်ပေါ်တွင်အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ရောင်။
Kangal Dogs ၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြIssနာများ
ခွေးတစ်ကောင် Hip Dysplasia သည်ခွေးများ၏တင်ပါးဆုံရိုးအတွင်းနာကျင်မှုနှင့်အဆစ်အမြောက်အများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောဤခွေးများအတွက် heritable အခွအေနေဖြစ်ပါတယ်။ ဤအခြေအနေသည်တိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားသောမျိုးပွားမှုနှင့်ခွဲစိတ်မှု ၅၀% တွင်ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ ကျော်ကုန်ကျနိုင်သည် ။
Hip dysplasia သည်ခွေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်တစ်ခုတည်းသောမျိုးရိုးဗီဇရောဂါဖြစ်သည်။
breရာမမျိုးဆက်များကဲ့သို့ပင်ဆေးဝါးကုသမှုကို ပို၍ လိုအပ်သောပမာဏ (ဥပမာ - နှလုံးရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး) နှင့်အကျိုးဆက်မှာပိုမိုကုန်ကျသည်။
ပထမနှစ်အတွက်ဆေးကုသစရိတ်အတွက်ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေမှာဒေါ်လာ ၁၂၀၀ ဖြစ်သည်။
ဤသည်ဖောက်အလွန်ကျန်းမာရေးဖောက်ဖြစ်တယ်, သင်ကောင်းတစ် ဦး မွေးမြူရေးမှဝယ်ပေး - ခွေးတာဝန်ရှိသည်ခွေးခဲ့သည့်, ထို့နောက်သူတို့စိုးရိမ်ပူပန်ခံရဖို့များစွာသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများမဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဤခွေးကိုသင်အလေးအနက်စဉ်းစားပါကအမေရိကန်ရှိ Kangal Dog Club နှင့်သင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သင့်သည် အဓိကသော့ချက် ၁၂ ချက်နှင့်အတူကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမွေးမြူရေးစံနှုန်း :
ခွေးကလေးအားလုံးကို UKC တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
စာချုပ်တရားဝင် binding အရောင်း
မင်းသိလား? စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်အချက် ၅ ချက်
အဆိုပါဖောက်ပြန် 12 မှစတငျthတူရကီသိုးထိန်းများသည်ခွေးအားဝံပုလွေများနှင့်ဝံကောင်များအပါအဝင်သားကောင်များမှကာကွယ်ရန်ခွေးကိုအသုံးပြုခဲ့သည့်ရာစုနှစ်။
တစ် ဦး ကအပြည့်အဝကြီးထွားအထီးပေါင် 140 ကျော်နိုင်ပါတယ်။
Kangal Shepherd သည်အပြာရောင်ခွေးတစ်ကောင်လျှင်ပေါင် ၇၀၀ ကျော်စွမ်းအားကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ခွေးတစ်ကောင်ကမ္ဘာတွင်အကိုက်အခဲအင်အားအများဆုံးရှိသည်။ Rottweiler ကိုစတုရန်းလက်မ ၃၂၈ ပေါင် (သို့) biteforce 150 ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
ဤခွေးသည် Anatolian Shepherd မဟုတ်ပါ၊ သူတို့သည်ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်မှဆင်းသက်လာသောသီးခြားမျိုးစိတ်များဖြစ်သည်။
နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုသည် ၁၅၀ မှ ၂၅၀ ကြားရှိသိုးအုပ်ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။
အောင်မြင်သောပိုင်ရှင်သည်ခွေးအားတက်ကြွသောအခန်းကဏ္ and နှင့်ခိုင်မာသော ဦး ဆောင်မှုပေးနေစဉ်တွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိရမည်။
ဒီဖောက်ပူဇော်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်; သစ္စာရှိမှု, မကြောက်တရားနှင့်အုပ်ထိန်းသူ။
Kangal ကိုမင်းပိုင်ဆိုင်ပြီးသူတို့မှာဘာအခန်းကဏ္ have မှပါဝင်ခဲ့သလဲ။ သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေပါ (သို့) အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမေးခွန်းများကိုမေးမြန်းပါ။
သင်၏ရွှေ Retriever သည်အဘယ်ကြောင့်သွန်းနေပြီး၎င်းကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း
siberian husky ကို pomeranian နှင့်ရောသည်
alpha နှင့် omega wolf အမည်များ
jack russell cross chihuahua သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်သည်